स्त्रीले सुधार्नु पर्ने पाँच स्वभाब – onlinedarpan:
Posted on December 24, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 45 Views
Share4TweetGoogle+Pin04sharesकाठमाडौँ – स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्ने हो भने भान्टा निकै फाइदाजनक हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहने हुँदा युवतीहरुले भण्टालाई मन पराउने गर्छन् । उनीहरु स्वादिलो तरकारी तथा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरुको सौखिन हुन्छन् । हाम्रो गाउँघर तिर पाइने भाण्टामा निकै पौष्टिक तत्व पाइन्छ । भान्टामा भिटामिन सि पनि पाइन्छ । भान्टामा पाइने पौष्टिक तत्वले विभिन्न विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
श्रीमान श्रीमतीले अनिवार्य पढ्नुस ! नपढे जीवनभर पछुतो हुनेछ ! सम्पुर्ण श्रीमान श्रीमतीमा समर्पित
Share31TweetGoogle+Pin031sharesश्रीमान श्रीमतीले अनिवार्य पढ्नुस ! नपढे जीवनभर पछुतो हुनेछ ! सम्पुर्ण श्रीमान श्रीमतीमा समर्पित एकपटक अवश्य पढ्नु होला। एक दिन छोराले अाफ्नो पितासँग गुनासो गर्छन। छोरा := बुबा म मेरी पत्नीसँग अब सगै बस्न सक्दिन। बुबा:= किन छोरा, के भयो एक्कासि? छोरा := उनी धेरै बदलिएकी छिन। न मसँग राम्ररी कुरा गर्छिन। न मैले सोधेको विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
सन् २०१९ भित्र बिहे गर्ने काेमल वलीकाे घाेषणा
Share22TweetGoogle+Pin022sharesकोमल वली भन्छिन् : सन् २०१९ भित्रै मेरो स्वयम्बर हुन्छ काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्य एवं गायिका कोमल वलीले सन् २०१९ भित्रै स्वयम्बर हुने बताएकी छिन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा गुरु मञ्जरी गु्रपद्धारा सञ्चालित ‘माइस्वयम्वर डटकम’को उद्घाट्न गर्दै वलीले भनिन्, ‘स्वयम्बरको खोजीमा रहेकी मान्छेले नै माइस्वयम्बर डटकम सार्वजनिक गर्नुपरेको छ, यही वर्षभित्र मेरो स्वयम्बर भेटिन्छ कि क्या हो? विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…